China Great Quality Concrete Accelerator, Factory Price Manufacture and Factory | Fluffier
Inkxaso yobugcisa kwi-Intanethi, Okunye
Ubunakho beProjekthi yesisombululo:
isisombululo esipheleleyo seeprojekthi, AKUKHO
izongezo zekhemikhali zokwakha
I-RN-2 i-accelerator yekhonkrithi luhlobo lwe-arhente entsha yokukhawuleza, umsebenzi wayo wobugcisa kunye nenzuzo yezoqoqosho iphezulu kunemveliso efanayo kwimarike yasekhaya. I-cane isetyenziswe ngokubanzi kwiiprojekthi zombane phakathi koololiwe, uhola wendlela, itonela, imigodi yamalahle kunye neendawo zombane oqhutywa ngamanzi, kunye nezinye iiprojekthi ezifuna ubuchwephesha bokumisela ngokukhawuleza.Umgubo wale mveliso ungwevu, ulwelo alunambala okanye luphuzi. I-alkaline ebuthakathaka, ayinayo ityhefu, ayinakutsha, ayinayo ityuwa yeklorini, kwaye ayinayo impembelelo ye-rust bar yensimbi. Umthamo we powder yi-4-6%, kwaye umxholo we-liquid ngu-2-5%;
I-RN-5 i-ejenti yokumisela ngokukhawuleza yekhonkrithi inokuguquguquka okulungileyo kwi-samente, ibeka ngokukhawuleza kwaye ilukhuni kunye nexesha lokuqala lokumisela elingaphantsi kwemizuzu emi-5 kunye nexesha lokugqibela lokumisela lingaphantsi kwemizuzu eyi-10. Ekubeni amandla oxinzelelo lwe-1d ayikho ngaphantsi kwe-Mpa, kunye ne-28d
amandla oxinzelelo angaphantsi kwe-75%, ihambelana nemfuno ye-JC477-005 ye "Flash setting admixtures of sprayed concrete". Ikhonkrithi etshisiweyo elungiselelwe le mveliso inokulahleka okuphantsi kwamandla, izinga eliphantsi lokubuyela kwakhona kunye nokutshiza kokuqala okuphezulu
Ubukhulu, kuluncedo ukuphucula umgangatho kunye nokuqina kweeprojekthi zekhonkrithi ezitshiziweyo kunye neenzuzo ezibonakalayo zobugcisa kunye nezoqoqosho.
Amanyathelo okulwa nokubola kufuneka athathwe xa usebenzisa kwisayithi ngomlinganiselo ochanekileyo. Ipowder kufuneka isetyenziswe emva kokuvula isikhwama, ngelixa i-liquid kufuneka itywinwe ukukhusela. Ukwakhiwa kwekhonkrithi etshisiweyo, kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-samente entsha ye-portland. Ngenxa yokuba ukuba i-samente ye-portland eqhelekileyo, i-samente ye-slag portland idityaniswe ngumswakama kwiqondo lokushisa eliphantsi umphumo wokusetyenziswa uya kuchaphazeleka. Kwikhonkrithi etshiziweyo, kukhethwa ukuba kusetyenziswe ingqalutye okanye igrabile enobungakanani besuntswana elikhulu elingekho ngaphantsi kwe-20 mm kunye nesanti erhabaxa ephakathi enemodyuli ye-fineness ye-2.8-3.5.
Oololiwe, iitonela, oohola bendlela, imigodi
Amanani alawulwa ngaphakathi/Iinkcukacha
Ngaphambili: Factory ixabiso admixture Cement izongezo zesamente aid yokusila
Okulandelayo: UmGangatho oMkhulu ngexabiso elikhulu leConcrete Accelerator
I-Accelerator kunye ne-Retarder kwi-Concrete
I-Concrete Accelerator Additive
Concrete Accelerator Umxube
I-Agent ye-Accelerator ye-Concrete
Iiarhente zeAccelerator zeConcrete
Iintlobo ze-Accelerators zekhonkrithi
I-Accelerator esetyenzisiweyo ekhonkrithi
IFactory Sales Concrete Accelerator
Umgangatho olungileyo weConcrete Accelerator
Umgangatho ophezulu weConcrete Accelerator
Ixabiso eliphantsi Concrete Accelerator
IBanga eliphezulu leConcrete Accelerator
Inqanaba eliphezulu leConcrete Accelerator
Umgangatho ophezulu we-Concrete Accelerator